China Brass Gas Valve၊ Water Heater Gas Valve၊ Gas Ball Valve Leading Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်, ကြေးဝါဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်, ရေအပူပေးစက်ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်, ဓာတ်ငွေ့ဘောလုံးအဆို့ရှင်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > အဆို့ရှင် > ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်
ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်, ကြေးဝါဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ရေအပူပေးစက်ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါ mini ကိုအဆို့ရှင်အဆို့ရှင် chrome  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါအသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင်နီကယ်ချယ်ထားသည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါအသေးစားဓာတ်ငွေ့ဘောလုံးအဆို့ရှင်နီကယ်ချယ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါ Mini ကိုဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါအသေးစားဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်နီကယ်ချွတ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါ Mini Mini ကိုအဆို့ရှင် Chrome ကို Plated  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါ Mini Mini ကိုအဆို့ရှင်ဓာတ်ငွေ့အသုံးပြုမှု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါ Mini Ballve Valve 3/8 "X3 / 8"  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါ Mini ကိုဓာတ်ငွေ့ဘောလုံးအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပိုက် Union နှင့်အတူကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8659 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါ mini ကိုအဆို့ရှင်အဆို့ရှင် chrome
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8657 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ??,3/ 4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT...
ကြေးဝါအသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင်နီကယ်ချယ်ထားသည် ART.8656 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / 4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP /...
ကြေးဝါအသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင်နီကယ်ချယ်ထားသည် ART.8655 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / 4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP /...
ကြေးဝါအသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင်နီကယ်ချယ်ထားသည် ART.8654 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP /...
ကြေးဝါအသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင်နီကယ်ချယ်ထားသည် ART.8653 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 /4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP /...
ကြေးဝါအသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင်နီကယ်ချယ်ထားသည် ART.8652 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP /...
ကြေးဝါ Mini Mini ကိုအဆို့ရှင် Chrome ကို Plated ART.8651 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် ခရုမ်း Plated အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3....
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8650 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ?? X3 / 8â€ ?? 1/2 €€ X5 / 8â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP /...
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8648 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 3/8â€ ?? X3 / 8 အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT...
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8647 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် အရွယ်အစား:3/ 8â€ ?? X3 / 8â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT...
ပိုက် Union နှင့်အတူကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8646 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး ပိုက်နှင့်အတူအဆို့ရှင် ပြည်ထောင်စု အရွယ်အစား: ၅/၈ ?? X3 / 8â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome...
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8645 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ?? X3 / 8â€ ?? 1/2a € ?? X5 / 16â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP...
တရုတ်နိုင်ငံ ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် ပေးသွင်း
တရုတ်ဂတ်စ် Valve ၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဦးဆောင်, ကြှနျုပျတို့စသည်တို့ကိုကြေးဝါကဲ့သို့၎င်းဓါတ်ငွေ့ Valve, ရေအပူပေးစက်ဓာတ်ငွေ့ Valve, ဓါတ်ငွေ့ Ball ကို Valve အတွက်အထူးပြုနေကြတယ်
1, ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့နှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာရန်သူ ဂတ်စ်အဆို့ရှင် ၏လယ်ပြင်၌အထူးပြုလူတန်းစားဖြစ်ကြသည်။
3, ကောင်းသောပြီးနောက် - ရောင်းချခြင်းဝန်ဆောင်မှု။
ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် ကြေးဝါဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် ရေအပူပေးစက်ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် ဓာတ်ငွေ့ဘောလုံးအဆို့ရှင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်